Basic Attention Token စျေး - အွန်လိုင်း BAT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Basic Attention Token (BAT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Basic Attention Token (BAT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Basic Attention Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $345 401 832.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Basic Attention Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Basic Attention Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Basic Attention TokenBAT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.268Basic Attention TokenBAT သို့ ယူရိုEUR€0.226Basic Attention TokenBAT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.204Basic Attention TokenBAT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.244Basic Attention TokenBAT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.39Basic Attention TokenBAT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.69Basic Attention TokenBAT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.91Basic Attention TokenBAT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.996Basic Attention TokenBAT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.355Basic Attention TokenBAT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.374Basic Attention TokenBAT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.92Basic Attention TokenBAT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.07Basic Attention TokenBAT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.44Basic Attention TokenBAT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹20.05Basic Attention TokenBAT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.45.19Basic Attention TokenBAT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.367Basic Attention TokenBAT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.409Basic Attention TokenBAT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.33Basic Attention TokenBAT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.86Basic Attention TokenBAT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥28.52Basic Attention TokenBAT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩317.62Basic Attention TokenBAT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦103.38Basic Attention TokenBAT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽19.6Basic Attention TokenBAT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.32
Basic Attention TokenBAT သို့ BitcoinBTC0.00002 Basic Attention TokenBAT သို့ EthereumETH0.000697 Basic Attention TokenBAT သို့ LitecoinLTC0.00492 Basic Attention TokenBAT သို့ DigitalCashDASH0.00295 Basic Attention TokenBAT သို့ MoneroXMR0.00301 Basic Attention TokenBAT သို့ NxtNXT20.88 Basic Attention TokenBAT သို့ Ethereum ClassicETC0.0395 Basic Attention TokenBAT သို့ DogecoinDOGE77.25 Basic Attention TokenBAT သို့ ZCashZEC0.00325 Basic Attention TokenBAT သို့ BitsharesBTS8.25 Basic Attention TokenBAT သို့ DigiByteDGB8.57 Basic Attention TokenBAT သို့ RippleXRP0.951 Basic Attention TokenBAT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00923 Basic Attention TokenBAT သို့ PeerCoinPPC0.888 Basic Attention TokenBAT သို့ CraigsCoinCRAIG121.98 Basic Attention TokenBAT သို့ BitstakeXBS11.42 Basic Attention TokenBAT သို့ PayCoinXPY4.67 Basic Attention TokenBAT သို့ ProsperCoinPRC33.59 Basic Attention TokenBAT သို့ YbCoinYBC0.000144 Basic Attention TokenBAT သို့ DarkKushDANK85.91 Basic Attention TokenBAT သို့ GiveCoinGIVE579.83 Basic Attention TokenBAT သို့ KoboCoinKOBO60.99 Basic Attention TokenBAT သို့ DarkTokenDT0.247 Basic Attention TokenBAT သို့ CETUS CoinCETI773.21
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:30:03 +0000.